Qalab CAD ah, qalabka wax lagu qoro gvSIG - Qoorta
Qalab CAD ah, qalabyada gvSIG
Febraayo, 2011 AutoCAD-AutoDesk, GvSIG, tabo cusub, Video
Waxaa la bilaabay taxane taxane ah oo xiiso leh, kaas oo ka yimid deeqda CartoLab iyo Jaamacadda La Coruña. gvSIG EIEL waxay ku lug leedahay kala duwanaansho kala duwan, runtii aad u faa'iido badan, labadaba maaraynta isticmaalaha gvSIG interface, qaababka caadiga ah iyo ansaxinta tooska ah.
Laakiin waxa ugu qabteen aan fiiro waa Tools CAD Open, taas oo version 0.2 ay u muuqataa in ay codsiyada badan qaadan ka bulshada in ay xooga saarto iyo in la wanaajiyo joogtada dhismaha iyo tafatirka xogta.
Haddii wax gvSIG leedahay, in aan jeclahay isticmaalayaasha GIS waa qalabkooda abuuritaanka qaabka aynu caadi ahaan ku sameyno barnaamijyada CAD, waxa ay si waxtar leh wax walbo oo aan wax uga weydiinay barnaamijyada GIS ee khaas ah. Adigoo ku rakibaya kordhintaan, extCAD waxaa lagu bedelay default. Buuggani wuxuu sharxayaa sida loo rakibo oo keliya fidinta, sababtoo ah waxay sidoo kale u muuqataa mid la fulin karo xitaa marka la eego qaabka hore ee gvSIG.
Waxay waxa ay u qaybsamaan fursad u gelin 11 amarrada soo socda: Point, Multipoint, halka, polyline, Multipolilínea, Multitasking, Multipolygon, oo joogto ah Geesooleyaasha, laydi, Circle, Ellipse iyo Autopolígono.
Iyadoo ikhtiyaarka Badalayo 16 soo socda ku amrayaa: Copy, Mirror, beddesha, Miisaanka, Qarxaan, Shift, Edit vertex dar Vertex, saar vertex, biir, Redigitize Goo line line Goo geesoolayaasha, geesoolayaasha Redigitize, geesoolayaasha Gudaha iyo Stretch .
Wadar ahaan 27, oo aan xasuusta hore waxay tiriyeen 21 marka la samaynayo isbarbardhigga amarrada "AutoCAD" ee ku saabsan kuwa gvSIG 1.9.
Waa maxay qiimaha ugu badan ee ku saabsan qalabka furan ee CAD 0.2
Si aan u bilaabo, waxaan ka helaa shaqooyinka ay tahay badhanka midigta, mar marka amarka la bilaabo wuxuu u shaqeyn karaa "dib u laabasho". Waxay u muuqataa mid aad u macquul ah, maxaa yeelay marka aad sawirto joomatari, tusaale ahaan polyvin ama polygon, waa caadi in la sameeyo qalad markii la gelinayo dhibic; Halkii laga joojin lahaa shaqada la qabtay, ama sii wado in la sii wado ...
badhanka saxda ah, iyo meesha ugu dambaysa ee la soo dhejiyay waa la tirtiray
Sidoo kale, waxaa jira furayaal ka caawiya shaqada, sida "tab", kaas oo kuu ogolaanaya inaad u socoto qaybta xigta. Waxay dhacdaa, tusaale ahaan marka aan wax ka beddelno joomatari jmiiri ah, sida marka laga eego xaalad adag oo leh faleebo, ama polylines badan.
furaha tabka, oo waxay naga qaadaysaa geometry xiga
Markaas waxaa jira meel bannaan si loo dhammeeyo shaqada iyo warqadda C in la joojiyo. Inkastoo ay jiraan kuwa si qarsoodi ah u waydiinaya isticmaalka kumbuyuutarka waqtigaan, maaddaama gaabnaanta dhexe ee amarka ayaa wali ah mid waxtar leh.
Jadwalka si loo casriyeeyo xariiqa iyo xajmiga xallinta xaddidan weyn marka la samaynayo dayactirka joomatari hore loo abuuray. Inkastoo, wax badan oo arrintan la socoto gvSIG, kordhinta ay sameeyeen jadwalku waa mid aad u wanaagsan, tusaale ahaan, marka xariiq ama baqshiish la gooyo, farriinta waydiisaneysaa haddii aanu doonayno in aanu ilaalino qaybta soo hartay.
Marka, beddelidda qalabka caadiga ah ee leh qalabka CAD-da "Open CAD Tools" waa ikhtiyaar wax ku ool ah. Qalabka kaliya ee aan la helin ayaa ah taliska laynka, sababtoo ah waxaa la abuuray amarka Polyline, fahamsan in kaliya uu leeyahay hal qayb.
Horumarin kale ayaa ku jira qaabeynta dhismooyinka guryaha, si aaney u saameynin xawaaraha mashiinka. Taas waxaad u bedeli kartaa tirada joometeriga ee falanqaynta, lakabyada iyo haddii raadraaca loo sameeyo kaliya si ciriiri ama geeso.
Kadibna, ikhtiyaarka si aad u dhaqaajiso NavTable si toos ah markaad dhameeyso joomatari. Tani, xogta alphanumeric waxaa lagu dhammaystiri karaa isla halbeegga habka wax soo saarka. Inkasta oo tilmaanta ugu weyn ee tan, ay tahay in dhamaystirka joomatari ay hadda tahay dhacdo, kaas oo barnaamijyadu ay qaban karaan noocyada kale ee hawlaha la xiriira:
Iyadoo dib u eegis lagu samaynayo kor-u-kaca ku salaysan mawqif,
In la qaado gawaarida oo ku dhawaaqaya isbeddelka xogta xitaa inkasta oo lakabyada vektorka aysan ku saleysneyn heer,
Ama si sahlan oo loo ogeysiiyo xog-ururin in joomatari gaar ah oo hore u jirey iyo in uu sii wado si uu u soo sheego sharafnimo marka loo eego xogta xogta. Maaddaama ay noqon kartaa kiis marka khadka la duubay, laakiin khariidadu way ka gaabisaa.
Ma noqon doonto wax cajiib ah si aan u aragno kordhintan ku jirta qaybta xigta ee gvSIG, sida aan ku aragnay NavTable. Waxaan u maleyneynaa inay tusaale fiican tahay, taas oo wadajir ah Fonsagua Waxay u taagan yihiin natiijada shaqada in Foundation ayaa qaan qaabaynta dhar warshadaha kaas oo ah mid ka mid ah awoodaha ee joogtaynta ee Open tiirarka dhufto ee Source.
Si aad ula socoto mowduucaan waxaan soo jeedinayaa xiriirrada soo socda:
Ka dibna fiidiyowga si aad u aragto isticmaalka EIEL ee habka wadada.
Post Previous«Previous Google Docs hadda waxay akhrisan karaan fxlfx files
Post Next Koorsada bilaashka ah ee gvSIGNext »